Soosaarista iyo Soo-saaraha jumlada B635A | Lu Young
B635A Qaabaynta maakis
Shaxda shaqada ee qorsheeyaha bullaacaddu waxay u rogi kartaa bidix iyo midig, worktable-ka wuxuu leeyahay farsamo dhaqso leh oo jiifa oo toosan; waxaa loo isticmaalaa in lagu qorsheeyo diyaaradaha qallafsan, taas oo markaa sii ballaarinaysa baaxadda isticmaalka.
Qorsheeyaha 'bullhead planer' waa qorsheeye sameeya dhaqdhaqaaq isweydaarsi qumman. Wanku wuxuu wataa qorsheeye. Waxaa loogu magac daray maxaa yeelay santuuqa galka hore ee wanku wuxuu umuuqdaa madaxa dibida. Qorshooyinka Bullhead waxaa badanaa loo isticmaalaa qorsheeyeyaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Inta badan dhaqdhaqaaqyada ugu waaweyn ee qorsheeyaha bullhead-ka waxaa wada farsamooyin crank-rocker, sidaa darteed xawaaraha socodka wanku waa mid aan sinnayn.
1. Shaxda shaqada ee qorsheeyaha lo'da waxay u wareegi kartaa bidix iyo midig, worktable-ka wuxuu leeyahay farsamo dhaqso leh oo jiifa oo toosan; waxaa loo isticmaalaa in lagu qorsheeyo diyaaradaha qallafsan, taas oo markaa sii ballaarinaysa baaxadda isticmaalka.
2. Nidaamka quudinta ee qorsheeyaha wuxuu qaataa farsamooyin kaam oo leh 10 heer oo quudin ah. Sidoo kale waa mid aad u habboon in la beddelo qadarka mindi.
3. Qorsheeyaha 'bullhead planer' waxaa lagu qalabeeyaa nidaam badbaado oo xad dhaaf ah oo ku jira nidaamka goynta. Markay goynta culeys badani ka timaaddo hawlgal taxaddar la'aan ah ama xoog dibedda ah, qalabka wax lagu jarayo ayaa iskiis u sibibixan doona, hawlgalka caadiga ah ee qalabka mashiinkuna waa la damaanad qaadayaa iyadoon waxyeello gaarin qaybaha.
4. Inta udhaxeysa wanka iyo hagaha sariirta, iyo sidoo kale qalabka gawaarida ee xawaaraha iyo dusha sare ee hagaha, waxaa jira saliid saliid ka soo saareysa mashiinka saliida ee loogu talagalay wareejinta saliidda.
Nidaamka saliidaynta iyo khariidada barta dhibcaha sifaynta ee qorsheeyaha bullhead
Qaybaha ugu muhiimsan ee dhaqdhaqaaqa mashiinka mashiinka, sida tareenka haga hagaha, farsamada dhagaxa, gearbox, sanduuqa quudinta, iwm.
Marka qalabka mashiinka la bilaabo, bamka saliida ayaa bilaabmaya inuu shaqeeyo. Mashiinka saliida wuxuu nuugaa saliida saliida saliida ee sariirta salka sariirta iyada oo loo marayo miiraha saliida, wuxuuna u sii maraa saliida kala sooca iyo dhuumaha si loo saliido qayb kasta oo ka mid ah qalabka mashiinka.
Dhab ahaan shaqada
1. Marka dogobku kor u kaco oo hoos loo dhigo, fur-furka qufulka waa in marka hore la furfuraa, waana in la adkeeyo furitaanka markuu shaqeynayo.
2. Lama oggola in la hagaajiyo garaaca walka inta lagu jiro hawlgalka qalabka mashiinka. Marka la hagaajinayo istaroogga wanka, looma oggola in loo isticmaalo habka taabashada si loo dabciyo ama loo adkeeyo xakamaynta hagaajinta.
3. Garaaca wanku waa inuusan ka badnaan xadiga loo cayimay. Xawaare sare lama oggola marka la isticmaalayo istaroog dheer.
4. Markay shaashadda karti u leedahay ama ay gacanta ku ruxdo, fiiro gaar ah u yeelo xadka aaladda faaligga si looga ilaaliyo furitaanka iyo lowska inay kala baxaan ama waxyeelleeyaan qalabka mashiinka.
Dhererka goynta ugu badan (mm)
Masaafada ugu badan ee salka hoose ilaa miiska dushiisa (mm)
Miiska ugu sarreeya ee safarka jiifka ah (mm)
Miiska ugu badan ee safarka toosan (mm)
Dusha sare ee qorsheeyaha si sariirta looga baxo masaafada ugu badan
Barakacii ugu badnaa ee wankii
Xagasha ugu sarreysa ee miiska shaqada (aan lahayn kuxirnaan)
Xagal ugu badnaan ee worktable ah (xigeenka)
Safarka ugu badnaan safarka toosan
Tirada istaroog wankii daqiiqad kasta
32, 50, 80, 125, jeer daqiiqo
Wanku hore iyo gadaalba qadarka miiska ayaa lagu quudiyaa
Gawri wareegsan ilig (taagan)
Gawri wareegsan oo ilig ah (jiif ah)
Wareeg wareega 4 ilig (toosan)
Wareeg wareega 4 ilig (jiif)
1.5kw 1400r / daqiiqo
Hore: CD6241 lathe Manual
Xiga: BK5030 cnc vertical Sloting machine for biraha
CK6132 sax sax ah aaladda gaang nooca mac hay ...
BK5030 cnc vertical Sloting machine for biraha
H50 biraha jeestay CNC Combo lathe axdi qarameedka machi ...
ck6180 culus culus bir mashiinka jiifku CNC ...
TCK630 Slant Sariirta CNC Lathe la nool Turret / ...